Prices and free legal aid – Somali – Adalat Advokatfirma AS
Kaalmada Sharci ee Lacag la’aanta ah.
Intooda badan Kiisaska ay Adalat dadka ka caawiso waa kiisaska gargaarka sharciyeed ee bilaashka ah lagu bixiyo. Arinta sharciyadan ku saabsani way adkaan kartaa in la fahmo sidaa darteed waxaan ku soo bandhigeynaa aragti guud halkan:
Waxaa jira laba nooc oo ah caawimaad sharci oo bilaash ah; kuwaas oo loo yaqaan “talo sharci oo bilaash ah” (fritt rettsråd) iyo “wakiil bilaash ah” (fri sakførsel). La-talinta sharciga ee bilaashka ah (fritt rettsråd) macnaheedu waa inaad heli doonto la-talin iyo caawimaad ku saabsan cabashadaada saacado cayiman. Wakiil bilaash ah (fri sakførsel) macnaheedu waa inaad xaq u leedahay inaad hesho qareen sharci oo dacwadaada keena maxkamada iyo maxkamadaha kale oo la mid ah maxkamadaha, sida gudiga daryeelka bulshada ee degmada (fylkesnemda) ama guddiga kormeerka.
Haddii aad xaq u leedahay gargaar sharci oo bilaash ah oo ku saabsan kiiskaaga waxay ku xirantahay nooca kiiskaaga iyo mararka qaarkood, intaad lacag hesho sanadkii iyo inta hantidaadu leegtahay. Haddii aad xaas leedahay ama saaxiib nololeed, waxay noqon doontaa isugaynta dhaqaalahooda si wadajir ah iyada ayaana go’aaminaysa inaad ku haboontahay caawimaad sharciyeed oo bilaash ah iyo in kale.
Xaaladaha qaarkood, gargaarka sharciga ee bilaashka ah waa la siiyaa iyadoo aan loo eegin kharashka aad hesho.
La-talinta sharci ee bilaashka ah iyada oo aan loo eegin dakhliga waxay khusaysaa kiisaskan:
Kiisaska ka dhanka ah UDI ama UNE, talobixinta sharciyeed ee bilaashka ah waxaa laga bixiyaa dacwadaha cabashada ee la xiriira magangalyada, masaafurinta, cayrinta, kala noqoshada sharciga deganaanshaha iyo codsiyada magangalyada ee magangalyo-doonka yar ee aan lala socon. Ogsoonow in kaalmada sharciga ee bilaashka ah ee masaafurintu ay khuseyso oo keliya kiisaska masaafurintu, taas oo la cadeeyay in masaafurintu ka dhalatay ku xadgudubka Sharciga Socdaalka.
Waxa kale oo aad xaq u leedahay inaad hesho talo bixin bilaash ah (fritt rettsråd) haddii aad dalbato magdhow ka dib markii lagugu eedeeyo ama lagugu soo oogo dacwad ciqaabeed oo kiiskaaga la laalay ama lagu siidayay oo danbi lagugu waayay.
Waxaad xaq u leedahay la-talin sharci oo bilaash ah (fritt rettsråd) haddii laguu geystay dhib ka dhalatay rabshad oo aad dooneysid inaad dacwad ka gudbiso dembiilaha.
Waxaad sidoo kale xaq u leedahay talobixin sharciyeed oo bilaash ah (fritt rettsr youd) haddii laguu geystey xadgudub ku saabsan amarada xakamaynta, guurka qasabka ah, ka ganacsiga dadka, xadgudubka lamaanaha, gudniinka gabdhaha, kufsiga, qaar ka mid ah ku xadgudubka galmada, xadgudubka ama aad tahay qof loo gaystay dambi waxyeello weyn u gaystay jirkaaga ama caafimaadkaaga waxaadna tixgelinaysaa inaad soo wargeliso xiriirka. Garyaqaanka ayaa markaa kaa caawin doona habka dib u eegista.
•	La-talin sharci oo bilaash ah (fritt rettsråd) ayaa sidoo kale la siiyaa kuwa lagu daweynayo iyaga oo aan rabin iyaga oo isbitaal dhimir oo aanay raali ka ahayn lagu daweeyo ama loo gudbiyo.
Wakiil bilaash ah (fri sakførsel) iyadoo aan loo eegin dakhliga ayaa lagu dabaqi karaa kiisaskan:
Haddii adeegga daryeelka carruurtu (barnevernet) uu doonayo inuu soo saaro go’aan deg-deg ah, sameeyo amar daryeel ama si khasab ah u korinayaan ilmahaaga, waxaad xaq u yeelan doontaa wakiil bilaash ah (fri sakførsel). Ogsoonow inaad sidoo kale leedahay talobixin sharci oo bilaash ah (fritt rettsråd) oo ah latalinta dhammaan kiisaska halkan lagu xusay.
Matalaad bilaash ah ee sharci (fri sakførsel) ayaa sidoo kale la siiyaa kuwa la geeyo isbitaal dhimir aan si qasab ah, oo raba inay helaan xaquuqda maxkamadeynta dhamaan nidaamka sharciga.
Xaaladaha aad rabto inaad u sheegato magdhow dambiilaha ka dib markii laguu geystey xadgudub rabshadeed.
Kiisaska faraha badan, qareen bilaash ah ayaa la siiyaa dacwadaha ciqaabta ah, laakiin tan ayaa markaa loogu yeeraa in loo magacaabo qareen difaac oo dadwayne oo loo magcaabo “kiisaska ciqaabta”.
Waxaad sidoo kale dalban kartaa qareen bilaash ah inta lagu gudajiro dacwada ciqaabta haddii aad tahay dhibbane, kaas oo lagula macaamilayo “kiisaska ciqaabta”.
Kaalmada sharci ee bilaashka ah ee ku Xidhan Dakhliga.
Sidaan soo sheegnay, talobixin sharciyeed oo bilaash ah iyo wakiil sharci oo bilaash ah (fri sakførsel) ayaa sidoo kale la siin karaa kiisaska kale qaarkood iyadoo kuxiran inta aad uu leegyahay dakhliga ku soo gala iyo inta ay leegtahay hantidaadu. Haddii aanad Wali guursan oo uu ku soo galo dakhli ka yar kayar 320,000 NOK sanadkiiba intaan cashuurta lagaa jarin, oo hantidaaduna ka hooseyso 100,000 NOK, waxaad xaq u yeelan doontaa gargaar sharci oo bilaash ah kiisaska aan soo sheegnay, sidoo kale haddii aad leedahay xaas ama lammaane aad isla nooshihiin, dakhligiinuna waxa uu noqonayaa isku darka wadar ahaan 490,000 NOK ka hor canshuurta laydinka jarin iyo hantida ugu badan oo gaadhaysa NOK 100,000.
Marka kaalmada sharciga ee bilaashka ahi ay ku tiirsan tahay dakhligaaga, waa inaad bixisaa tabaruca macmiilka ee gargaarka si aad u hesho. La talinta sharciga ee bilaashka ah, waa inaad bixisaa 1121 NOK sanadka 2022 (1 mar qiimaha dadweynaha ee gargaarka sharciga ee bilaashka ah). Wakiilka bilaashka ah (fri sakførsel), qofka la siinayo gargaarka sharci waa inuu bixiyaa 25% kharashyada, laakiin ugu badnaan NOK 8968 ee 2022 (8 jeer qiimaha dadweynaha ee gargaarka sharciga ee bilaashka ah). Xadiga qiimaha dadweynaha ayaa kordhaya sanad walbana xaddiga kor ku xusan ayaa markaa kadib ku kordhi doona kororka sicirka. Haddii aad hesho dakhli ka hooseeya 100 000 NOK sanadkii, waa laga dhaafayaa tabaruca macmiilka.
Talada sharciga ee bilaashka ah (fritt rettsråd) ee ku xidhan dakhliga qofka waxa lagu dabaqayaa kiisaskan:
Kiisaska aad uga dacwooto go’aan ka soo baxay NAV ee hoos imanaya Xeerka Caymiska Qaranka (tusaale faa’iidooyinka shaqo la’aanta, dheefaha xanuunka, faa’iidooyinka naafada iyo faa’iidooyinka kale ee ku jira caymiska qaranka ee khuseeya qoyska iyo lacagta hawlgabka).
Kiisaska aad ka dalbatid ama ka dacwooto go’aan ku saabsan magdhawga dhibbanaha kadib markii laguu geysto fal dambiyeed dhibaato.
Haddii lagaa tagay oo aad ka luntay waalikaa ama aad ku dhaawacantay dhaawac shaqsi ah oo aad rabto inaad dalbato magdhaw.
Kiisaska ceyrin khaldan ama ceyrinta ee loo-shaqeeyahaaga.
Kiisaska xidhiidha in lagaa soo tuuro guriga aad kireysatay
Arrimaha wada-noolaanshaha ee khuseeya daryeelka carruurtaada, haddii aad xaq u leedahay inaad wada noolaataan iyo cidda ay tahay inuu qaado mas’uuliyada waalidnimo ee caruurta.
Arrimaha khuseeya sida adiga iyo saygaaga / saygaaga aad u qaybisanaysaan hantida furniinka kadib.
Wakiilo bilaash ah (fri sakførsel) iyadoo ku Xidhan dakhliga qofka ayaa lagu dabaqayaa kiisaskan:
Arimaha daryeelka ilmaha, xuquuqda helitaanka ilmaha (booqashooyinka) ama masuuliyada waalidnimo.
Xaaladaha ku saabsan ka saarista guryaha.
Marka laga hadlayo magdhawga dhaawaca shaqsiyeed ama luminta adeeg bixiyaha
Qareen Difaac – Forsvarsadvokat
Haddii aad tahay dhibane fal dambiyeed, waxaad xaq u leedahay qareen kaa caawiya labada marxaladoodba, baaritaanka iyo marka kiisku maxkamadda yimaado. Waxaad had iyo jeer xaq u leedahay qareen ku caawiyo haddii lagugu xadgudbay amarka xakamaynta, guurka qasabka ah, ka ganacsiga dadka, ku xadgudubka lamaanaha, gudniinka xubnaha taranka, kufsiga, ku xadgudubka noocyada galmada ah, xadgudubyada kale ama waxa laguu geystey a dembi dhaawac weyn ku sababay jirkaaga ama caafimaadkaaga. Waxaad sidoo kale, qiimeyn faahfaahsan ka dib, laguu magacaabi karaa garyaqaan ka baxsan kiisaskan haddii nooca iyo halista kiisku muujinayo. Adalat waxay sii baari doontaa haddii aad xaq u leedahay qareen ku caawiyo oo aad raadsato meesha ay salka ku hayso.
In kasta oo aadan xaq u lahayn caawimaad sharci oo bilaash ah, Adalat waxay, dhowr kiis oo la xiriira cabashooyinka ka dhanka ah go’aannada dadweynaha iyo kiisaska kale ee ka jira aagagga uu khuseeyo nidaamka gargaarka sharciga bilaashka ah, ay ku siinayaan qiimo go’an. Tan macnaheedu waa inaad ku bixisid hal qiimo go’an hawsha adiga oo aan ka walwalin qareenka shaqadu inuu saacadaha tirinayo oo kugu soo dalacayo kharash. Qiimayaal go’an ayaa badanaa la bixiyaa kiisaska ka socda UDI, NAV iyo hay’adaha kale ee dawladda. Haddii qiimo go’an la bixinayo iyo in kale waxaa lagu qiimeeyaa iyada oo ku saleysan baaxadda iyo kakanaanta kiiska iyo xaaladda dhaqaale ee macmiilka.
Caymiska ama Xubin ka noqoshada Ururka Shaqaalaha.
Haddii aad leedahay caymis ama aad xubin ka tahay urur shaqaale, waxaa habboon in la baaro shuruudaha caymiska ama heshiiska aad la gasho ururkaaga shaqaalaha, si loo ogaado inaad xaq u leedahay inaad daboosho kharashka kaalmada sharciga, qayb ahaan ama dhammaantii. Adalat ayaa kuu baari doonta tan meesha ay ku habboon tahay.
Haddii kale Qiimaha
Haddii kale, qiimaha iyo shuruudaha ayaa lagu tixgelin doonaa xaalad kasta. Adalat waxay ku shaqeysaa sicirka saacad ahaan laga bilaabo NOK 1200-2500 oo ay ku jiraan canshuuro gaar ah oo lagu daray. Tani waxay si gaar ah u khuseysaa kiisaska loo gudbinayo maxkamadda. Iyada oo kuxiran kakanaanta iyo baaxadda kiiska, qiimayaashu way ka badan karaan qiimaha halkan lagu sheegay. Haddii kale, xaqiijinta meelaynta ayaa loo diyaarin doonaa kiis shaqsiyeed kaas oo qeexaya shuruudaha shaqada.